Second Hand Bale အမျိုးသမီးပိုးဂါ ၀ န်အတို
ဖေါ်ပြချက်:အသုံးပြုအမျိုးသမီးများ Aestival ပါးလွှာဂါ ၀ န်,အသုံးပြုအမျိုးသမီးများနွေရာသီပိုးထည်အကျီင်္များအသုံးပြုခြင်း,တစ်ပတ်ရစ်သက်သောင့်သက်သာပိုးထည်ဂါ ၀ န်
Home > ထုတ်ကုန်များ > တပတ်ရစ် Ladies အဝတ်များ > တပတ်ရစ်ပိုးဂါ ၀ တ်များ > Second Hand Bale အမျိုးသမီးပိုးဂါ ၀ န်အတို
Second Hand Bale အမျိုးသမီးပိုးဂါ ၀ န်အတို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Style: Fashion, Fashionable
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပန်းချီကားတစ်ချပ်ဟာခါးကိုခံနိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းပါတဲ့ပိုးထည်ပါးလွှာသောအ ၀ တ်အစား၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအ ၀ တ်အထည်နှင့်ပုံသဏ္proportionာန်အချိုးအစားကိုသုတ်လိမ်းခြင်း၏ ၀ တ်စုံသည်အ ၀ တ်အထည်၏လည်ပင်းသည်အမြင့်တစ်ခုအထိမြင့်တက်လာသည်ကိုပြသသည့်အတိုင်းအမျိုးသမီးများဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအမြင်ဖြင့်မြင်နိုင်သည်။
ဤရွေ့ကား Bales အသုံးပြုတဲ့ပိုးဆင်မြန်းထားရှိရေး။ အသုံးပြုသောပိုး ၀ တ်စုံများအားအထူးသတ်မှတ်ထားပြီးအရည်အသွေးအရအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမျိုးသမီးချည်နှင့် ၀ တ်စားဆင်ယင်ရန်အလွန်တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များရှိပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည်ပိုက်လိုင်းပေါင်းစုံမှ ဖြတ်၍ အတုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ရွေးချယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ါဂွမ်းဝတ်စုံများကို ၀ တ်ဆင်ရမည်၊ ဖက်ရှင်စတိုင်နှင့်အသွင်အပြင်သည်ပျက်စီးခြင်း၊ ရေနံနှင့်စွန်းထင်းမှုမဖြစ်စေရန်လိုအပ်သည်။ အရည်အသွေးလိုအပ်ချက် ၇၀ မှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိရရှိရမည်။ နောက်ဆုံးတွင် elastic strip သို့မဟုတ် button နှင့် zipper တို့ကိုသိုလှောင်မှုထဲသို့မစစ်မီပုံမှန်အသုံးပြုမှုစံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီရန်ထပ်ခါထပ်ခါစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
မေး။ ။ သင်စက်ရုံလား၊ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား။
A: အေးဂျင့်မဟုတ်တာကထုတ်လုပ်သူပဲ၊ ကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်သမားအဖွဲ့ရှိတယ်။
မေး။ ။ စက်ရုံလိပ်စာဘယ်မှာလဲ။
A: ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံဟာပေကျင်းနားကတရုတ်နိုင်ငံ Shandong ပြည်နယ် Jinan City မှာတည်ရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့မြို့တွင်လေဆိပ်နှင့်ရထားဘူတာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Qingdao ဆိပ်ကမ်းနှင့်နီးသည်
မေး။ ။ စက်ရုံမှာပစ္စည်းဘယ်လောက်များများရှိသလဲ။
အ ၀ တ်အထည်အမျိုးအစား ၅၀ မျိုးရှိတယ်။ အဝတ်အစားတွေကိုလည်းခွဲနိုင်တယ်
Q: 4. မည်မျှထုတ်ကုန်အမျိုးအစားနှင့်သူတို့၏စျေးနှုန်းကဘာလဲ?
A: ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးရှိသည်။ ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်ငါးမျိုးကိုဖြတ်သန်းသွားမည်
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှမထွက်ခွာမီ QC ၏အဆင့်များဖြစ်သောကြောင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
Q: ၅။ ထုပ်ပိုးစာရင်းကဘာလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ၄၀ ကီလိုဂရမ် / ၁၀၀ ကီလိုဂရမ် / အလေးကိုလုပ်နိုင်သည် (ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအရ)
မေး - ၆။ လက်မှတ် (BV, SGS စသည်ဖြင့်) လုပ်လို့ရလား။
ဖြေ။ ။ ဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Q: ၇။ ငွေပေးချေမှုပုံစံကဘာလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် T / T, Paypal, Western Union ကိုလက်ခံသည်။ CAD မ
Q: ၈ ။ စက်ရုံကိုအရင်သွားပြီးအမှာစာပေးမှာလား။
ဖြေ။ ။ စက်ရုံကိုအချိန်မရွေးလာလည်ဖို့ဖိတ်ပါတယ်
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : တပတ်ရစ် Ladies အဝတ်များ > တပတ်ရစ်ပိုးဂါ ၀ တ်များ
အသုံးပြုအမျိုးသမီးများ Aestival ပါးလွှာဂါ ၀ န် အသုံးပြုအမျိုးသမီးများနွေရာသီပိုးထည်အကျီင်္များအသုံးပြုခြင်း တစ်ပတ်ရစ်သက်သောင့်သက်သာပိုးထည်ဂါ ၀ န် Bales အမျိုးသမီးများ၏ Aestival ပါးလွှာဂါ ၀ န် အသုံးပြုအမျိုးသမီးများဘောင်းဘီ၏ Bale အသုံးပြုအမျိုးသမီးတစ် ဦး တည်းပခုံးအိတ် အသုံးပြုအမျိုးသမီးများအတွက်အားကစားဘောင်းဘီများ အသုံးပြုသောအမျိုးသမီးပိုးထည်